Nécrologie du 15 septembre 2020 - ewa.mg
Nécrologie du 15 septembre 2020
News - Nécrologie du 15 septembre 2020
L’article Nécrologie du 15 septembre 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.
L’article Nécrologie du 15 septembre 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Raindahiny amin’ny fanendahana sy sinto-mahery: voasambotra indray, tapa-bolana taorian’ny nivoahany ny fonja
Voasambotra, afakomaly, rehefa nifanenjehan’ny polisy, teny Andravoahangy ireto roalahy, voalaza fa jiolahy raindahiny amin’ny fanendahana sy fanaovana sinto-mahery. Vao tapa-bolana anefa izay no nivoahan’izy ireo ny fonja.Nahasambotra ireto jiolahy ireto ny polisy nanao fanamiana sivily miasa ao amin’ny CSP3 Antaninandro nampian’ny andrimasom-pokonolona eny amin’ny tsenan’Andravoahangy, afakomaly tolakandro. Ny iray, tratra teo am-panendahana vehivavy iray niantsena teny Andravoahangy kanefa voatazon’ilay vehivavy ny tanan’ity jiolahy sady afaka niantso vonjy ihany izy. Nahifik’ilay jiolahy ny tanan’ilay vehivavy ka tafaporitsaka izy, saingy efa nisy vaomiera’ny fandriampahalemana sy polisy nanao fanamiana sivily teny an-tsenan’Andravoahangy tamin’io fotoana io ka raikitra ny fifanenjehana tao anaty tsena. Tsy lasa lavitra anefa, tratra ity jiolahy raindahiny ity. Ny jiolahy faharoa kosa, tratra teo amin’ny lakandrano Andravoahangy rehefa avy nanendaka telefaonina finday. Fiaraha-miasa amin’ireo mpiambina ny tsena ihany koa ny nahafahan’ny polisy nisambotra ity jiolahy ity. Malaza ratsy amin’ny halatra telefaonina ity jiolahy ity ary efa ikoizana amin’izany. Nilaza ry zalahy fa vao nivoaka ny fonja tapa-bolana (tamin’ity volana jolay ity) kanefa izao nanohy ny asa ratsiny izao sahady.Tratra koa ny jiolahy mpangalatra kodiarana…Saron’ny polisy teny ambony tetezan’i Behoririka, afakomaly, koa ny jiolahy iray malaza ratsy amin’ny halatra kodiarana fiara. Ireo polisy nanao fisafoana amin’iny faritra iny no nahatsikaritra lehilahy iray nanao fihetsika hafahafa. Vantany vao nahatazana ny polisy anefa izy, nitsoaka avy hatrany ka raikitra teo ny fifanenjehana. Tsy lasa lavitra izy fa tratran’ny polisy. Nahitana “clé” famohana kodiarana fiara tany aminy nandritra ny fisavan’ny polisy. Nilaza izy tamin’ny famotoran’ny polisy fa mangalatra ny kodiaran’ireo fiara mipetrapetraka eny amin’ny manodidina an’Antaninandro sy i Behoririka iny.Jean ClaudeL’article Raindahiny amin’ny fanendahana sy sinto-mahery: voasambotra indray, tapa-bolana taorian’ny nivoahany ny fonja a été récupéré chez Newsmada.
Kitra: nanolotra 10 tapitrisa Ar ho an’ny Barea i Hery Be
Amin’ny maha olon-tsotra tia sy mpankafy ny baolina kitra azy, tonga nijery sy nanohana ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara, hiatrika ny “Lalaon’ny Nosy”, Rasoamaromaka Hery (Hery Be), fantatra amin’ny fanamboarana kianja synthètique. Nanome lelavola 10 tapitrisa Ar ho an’ireo mpilalao ny tenany, omaly tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. “Kely izany fa noho ny fitiavana ny Barea sy ny taranja baolina kitra, manampy anareo ny tenako”, hoy izy. Nomarihiny fa tsy vao izao akory ny tenany ny ao anatin’ity tontolon’ny baolina kitra ity fa efa hatrizay satria efa nitondra klioba ary efa mpitantana mihintsy ka tsy mba anisan’ireo lazaina fa mijapy masinina mandeha.Nohararaotiny ity fotoana omaly ity namaliana ireo olona mitabataba sy mifanenjika any anaty tambajotran-tserasera. “Aleo mifaninana aty amin’ny fanampiana ny Barean’i Madagasikara fa tsy hifaratsy sy hifanenjika any anatin’ireo tambajotran-tserasera ireny”, araka ny filazany.Notsiahiviny ihany koa fa fotoana efa ela ny nilazany fa ho kandidà hirotsaka hofidina ho filohan’ny federasiona ny tenany, ary mbola nanamafy izany indray, omaly tetsy Mahamasina. Nampanantena sahady izy fa raha ho lany amin’izany toerana izany, hanao izay haha matihanina ireo mpilalao malagasy, ary hampitomboina ny fanampiana ny vola hampiroboroboana ny baolina kitra eto an-toerana.Tsiahivina, fa i Maorisy no hidona voalohany amin’ny Barean’i Madagasikara eo amin’ity “Lalaon’ny Nosy” ity. Torcelin L’article Kitra: nanolotra 10 tapitrisa Ar ho an’ny Barea i Hery Be a été récupéré chez Newsmada.
Vokatra ny legioma: 5 000 Ar ny kesiky ny voatabia
Fotoana fiakaran’ny vokatra legioma izao fiafaran’ny ririnina izao. Mora ny vidiny, araka izany, mahafaly ny mpanjifa, saingy tsy ahazoan’ny tantsaha mpamokatra tombony loatra.Vokatra avokoa ny ankamaroan’ny legioma rehetra izay any Vakinankaratra sy any Itasy ny toerana tena mamboly azy ireny. Anisan’izany ny voatabia, ny petit pois, ny karaoty, ny ovy, ny voatavo, sns.Manodidina ny 5 000 Ar ny vidin’ny voatabia iray kesika, milanja 10 kilao eo ho eo, ivarotan’ny tantsaha mpamboly any an-tsenan’Ampary, distrika Soavinandriana Itasy. Nambaran’izy ireo fa voatery tsy maintsy amidy mora satria miara-miakatra avokoa ny vokatry ny mpamboly. Mila vola anefa satria maro ny ilana azy, toy ny hividianana kojakoja samihafa ao an-trano, ny hanonerana ny vola nindramina, ny fampidirana mpianatra, ny famadihana, sy ny hafa.Tsy mihetsika ny vidin’ny ovyMitobaka koa ny petit pois ao amin’ny tsenan’Andravoahangy. Amidy 300 Ar hatramin’ny 400 Ar ny kapoaka. Nilaza ny mpivarotra fa avy any Talata Volonondry ny toerana anisany tena be mpamboly azy. Voly avotra ny petit pois, maniry mandritra ny telo na efa-bolana, ambolena aorian’ny vary (vakiambiaty), niakatra ny volana mey na jona. Tsy mihetsika manodidina ny 800 Ar hatramin’ny 1 200 Ar kosa ny kilaon’ny ovy, na fotoana fahavokarany koa aza izao. Nilaza ihany ireo mpivarotra legioma etsy Andravoahangy fa ny tsaramaso indray no vokatra manaraka hiakatra, afaka iray volana eo ho eo.Raha manaraka ny fenitry ny tolotra sy ny tinady ny eto Antananarivo, tsy toy izany kosa ny any amin’ny faritra. Nambaran-dRajaonson, mpanangom-bokatra sady mpamatsy any Toamasina, fa misy fihenany kely ihany ny vidiny handraisana ny legioma any amin’ny tantsaha fa ny saran-dalan’ny fiara mpitatitra no tena mamaritra ny vidiny hivarotana azy any amin’ny faritra.Njaka AndriantefiarinesyL’article Vokatra ny legioma: 5 000 Ar ny kesiky ny voatabia a été récupéré chez Newsmada.
Concert classique de midi: hiatrika ny andiany faha-103 ny Quatuor Majesty
Tafiditra ao anatin’ny andiany faha-103 ny « Concert classique de midi » karakarain’ny Madagascar Mozarteum. Hiaka-tsehatra, anio etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM), ny Quatuor Majesty. Tarika ivondronan’ireo andrarezina amin’ny fandidiana « violon » sy « violoncelle », ahitana an’i Joachim Rakotoniaina (violon solo), i Samuthiah Andrianarivelo (violon faharoa), i Benja Andriambololona (Alto) ary i Atolotro Ho Fiderana Ny Finoana (violoncelle).Raha ny ao anaty fandaharam-potoana, holalaovin’izy ireo eny an-tsehatra ny “Intermezzo sinfonico du Cavallerie rusticana”, sanganasan’i Pietro Mascagni (quatuor), ny « Quartet n°35 an’i J. Haydn op.64 n°5” sy ny « Divertimento in F KV138 an’i Mozart.Marihina fa i Joachim Rakotoniaina no hitarika sy handrindra ity seho tanterahin’ny Quatuor Majesty, anio manomboka amin’ny 1 ora, ity.HaRy RazafindrakotoL’article Concert classique de midi: hiatrika ny andiany faha-103 ny Quatuor Majesty a été récupéré chez Newsmada.
Antananarivo : Olona telo voasambotra saika haka an-keriny teratany vahiny
Tsy nahomby ny tetik’ireto andian’olona telo nikasa haka volabe tamina teratany vahiny mpandraharaha monina eto Antananarivo tamin’ny fandrahonana hanao « kidnapping » ity farany. Voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava etsy Anosy izy ireo ary natolotra ny fampanoavana omaly 23 novambra. Araka ny fanazavana avy amin’ny Polisy dia niainga tamin’ny fitarainana voaray no nahasamborana ireto olona ireto. Ny 13 novambra tamin’ny 10 ora alina no voalaza fa nisy olona niditra an-keriny tao an-tranon’ity mpandraharaha ity. Ny ampitso, izany hoe ny 14 novambra tamin’ny 10 ora antoandro dia naharay antso an-telefaonina ilay mpandraharaha. Nilaza ilay antso fa tsy maintsy manome azy ireo 1 tapitrisa ariary ity mpandraharaha ity raha tsy izay dia halain’izy ireo an-keriny. Manoloana izany dia nandefa 200 000 ariary tamin’izy ireo ity farany. Koa satria efa nahazo fitoriana momba ity raharaha ity ny polisy dia nanokatra fanadihadiana avy hatrany ka nahafahana nisambotra vehivavy iray mpivarotra « puce » na finday eny amin’ny 67 ha, ny 15 novambra. Ity vehivavy ity no fantatra fa nividianana ireo nomerao finday nampiasaina niantsoana ilay teratany vahiny. Taorian’izay dia tratra ireo lehilahy roa izay tena atidoha rehefa nokarohina hatrany Moramanga. T.M.L’article Antananarivo : Olona telo voasambotra saika haka an-keriny teratany vahiny a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Samy manao izay mahametimety azy
Vita ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19? Mbola izay aloha ny resaka izao. Tsy mbola nofaranana ny fahamehana ara-pahasalamana, mitohy ny fanajana sy ny fampanajana ireo fepetra amin’izany. Nefa efa misy ny tsy tan-dalàna, na misy aza ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana. Samy manao izay saim-pantany ny tsirairay amin’izao? Na manao izay mahametimety azy, na izay mahafalifaly azy.Tsy maharitra hatramin’ny farany ny Malagasy rehefa manao zavatra? Mafana fo am-boalohany. Rehefa ela ny ela, miverina ho azy amin’izay fanao tsy mahafa-bela teo aloha. Na mahatsiaro tena ho malalaka avy amin’izay fihibohana izay ka samy manao izay mahametimety sy mahafalifaly azy. Sanatria, tapa-kofehy? Na ny sehatra hafa aza, ahitana izay fanaovana izay saim-pantatra izay etsy sy eroa.Am-boalohany ihany no samy tena nanaja antsipiriany sy manontolo ny fepetra ara-pahasalamana, ohatra, ny sehatry ny fitaterana. Amin’izao, misy manao izay saim-pantany: tsy hita intsony izay tsiranoka fanasan-tanana, tsy voahaja ny isan’ny toerana ary miovaova ny saran-dalana fa misy mitondra mpandeha antsasa-dalana… Hanao ahoana ny antoka fa resy sy efa lasa ny valanaretina Covid-19?Na amin’ny fidiran’ny sekoly aza, tsy ilaozan’izay manao izay mahametimety azy avy. Misy, ohatra, mbola manohy taom-pianarana lasa izay tsy vita na tsy hita be ihany, mbola hanao fitsapana ny fari-pahaizan’ny mpianatra hampiakarana kilasy azy na tsia, vao hiditra amin’ny taom-pianarana vaovao. Ao ny efa misisika amin’ny fitakiana saram-pisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana vaovao.Inona na ahoana koa? Santionany ireo fa samy manana izay mahazo azy sy izay ataony avy ny isana-tsehatra: asa, fivavahana…Tsy takona afenina amin’izany fa nampitondra faisana ny fihanaky ny valanaretina: nampisara-bazana, mampiady irery, mahatonga ny samy maka ho azy… ? Na fahalalahana, na fifaninanana, na tsy fiankinan-doha… Mbola misy ny soa iombonana sy mampiombona tsara jerena sy ampitomboina ?Rafaly Nd. L’article Samy manao izay mahametimety azy a été récupéré chez Newsmada.
Miroso mankany amin’ ny fifidianana loholona vaovao. Tsy misakana ny sarety tsy ho any Sabotsy ny horakoraka. Fifidianana ataon’ny olom-boafidy izy ity. Amin’ity fifidianana indray mitoraka ity dia tsy hisy intsony izany « doublon » izany satria tsy hisy ben’ny tanana « double » na mpanolon-tsaina « double » amin’ny kaominina iray izany no afaka hifidy sady vitsy raha teo ny isan’izy ireo raha mihoatra amin’ny vahoaka. Natao ahoana moa izany ilay didy navoakan’ny HCC momba ny famerenana ireo fifidianana ben’ny tanana sy mpanolon-tsaina vitsivitsy ? Nisy fepotoana napetrak’izy ireo io didy io. Voahaja ve ilay fepotoana ? Mifidy ve ireto governora notendrena ireto ? Apetraka amin’ny fomba ofisialy rahampitso 21 Septambra 2020 eny amin’ny CENI Alarobia ny filoha lefitry ny CENI vaovao. Nirina R. Cet article CENI : Mandeha ny mandeha est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article CENI : Mandeha ny mandeha a été récupéré chez Délire Madagascar.
BEPC: tombanana hivaly ny 5 oktobra farafahatarany
Efa nanomboka, omaly, ny fitsarana ny taratasim-panadinana ho an’ny taranja roa natrehin’ny mpiadina amin’ny BEPC, omaly, ho an’ny Cisco Antananarivo Renivohitra. Napetraka ny « grille de correction » niaraka amin’ny « commission d’entente » ary nisy ny fivoriana niarahana amin’ny mpitsara rehetra. Tombanana ho vita ny faran’ny herinandro ny fitsarana ny taratasim-panadinana ho an’ny taranja natrehina ka hampiditra ny naoty ao amin’ny ordinatera ny mpiasa ny alatsinainy ho avy izao. Mbola misy ny fanamarinana farany momba ny naoty avy eo. Herinandro aorian’izay, heverina fa hivoaka ny valim-panadinana farafahatarany ho an’ny eto an-dRenivohitra. Fito ny toerana fitsarana taratasim-panadinana. Ny taranja histogéo sy ny fizika simia no miandry ny mpiadina anio tontolo andro. Nanambara ny minisitry ny Fanabeazana fa haloa avy hatrany ny karaman’ireo mpiasa mikarakara ny fanadinana hatramin’ny fitsarana ka tsy hisy ny trosa amin’ity fanadinana 2020 ity.VonjyL’article BEPC: tombanana hivaly ny 5 oktobra farafahatarany a été récupéré chez Newsmada.
Namoaka mpampiofana miisa 55 ny Don Bosco
Mpampiofana miisa 55 no navoaka ny faran’ny herinandro teo tetsy Ampefiloha. “Hampivoatra kokoa ny sehatrasa eo amin’ny orinasa madinika sy salantsalany ny anton’ny hetsika mba ho matihanina kokoa na efa tompon’andraikitra aza ireto nivoaka ireto”, hoy ny eo anivon’ny birao teknika eo anivon’ny Don Bosco, ny mompera Ramaminirina Jeannot. Nanteriny fa natao ny fanofanana mba hahaizan’izy ireo mandray ireo mpiofana any amin’izy ireo avy ho amin’ny fampivoarana ny tontolon’ny asa. Eo ny fahaizana mampita sy mampianatra sy ny fanaraha-maso ireo tantaniny. “Miaraka amin’ny fanitsiana sy fanoroana mba hananana traikefa bebe kokoa. Anisan’izany ny fomba fanaovana tombana, ny fomba fanofanana”, hoy ihany izy. Misehatra eo amin’ny asa tanana, tahaka ny zaitra, ny taovolo, ny “soudure”, ny taon-kazo (OB) ny maro amin’ireto hampita ny fahaiza-mampiofana amin’ny hafa ireto.Nambaran’ny minisitry ny Fampianarana teknika, i Tsikeliankina Ernest, niatrika izao lanonana izao fa efa midina ifotony mijery ny filàna eny anivon’ny faritra ny departemanta tantaniny, miainga amin’ny vinan’ny filoham-pirenena. Anisan’izany ny hidiran’ireo tanora hatrany amin’ny iray tapitrisa eo amin’ny sehatry ny asa. Tafiditra ao anatin’izany ny fijerena ny mpiara miombona antoka ho amin’ny fanofanana.Synèse R. L’article Namoaka mpampiofana miisa 55 ny Don Bosco a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Lalao fanomanana: misisika ny hidona amin’ny Barea ny Hesperange
Tsy fantatra izay tena antony fa manao fanerena ankolaka ary tena misisika mafy ny hanaovana lalao firahalahiana amin’ny Barea de Madagascar ny Swift Hesperange Luxembourg. Efa tsy neken’ny federasiona malagasy (FMF) anefa izany. Nandefa taratasy any amin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) ny ekipan’ny Swift Hesperange D1 ao Luxembourg, misisika sy manao fanerena ankolaka mangataka hanao lalao firahalahiana amin’ny Barea de Madagascar. Hotanterahina aorian’ny fihaonan’ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny Etalons-n’i Borkina Faso, hatao any Lisbonne, Portugal, ny asabotsy 10 oktobra. Nambaran’ity ekipan’i Luxembourg ity fa hiantohany avokoa ny fivahinian’ny delegasiona malagasy, ny sakafo sy ny fiantranoana ary hatolotra ny Barea de Madagascar ny vola azo rehetra amin’io lalao io ary hampitaina mivantana amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera ny fihaonan’ny roa tonta, raha raikitra izany.Efa nanaiky ity lalao ity ny mpanazatra ny Barea de Madagascar, i Nicolas Dupuis, fa miandry ny valin-tenin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra izany sisa. Marihina fa efa nilaza ny tomponandraikitry ny FMF fa tsy mendrika ny Barea de Madagascar ny hifandona amin’ity ekipa vao niakatra D1 ao Luxembourg ity.Tsiahivina fa anisan’ireo manao ny fanelanelanana hisian’izao lalao izao ilay Malagasy, Randriantsoaray Justin (Plâtre), namana akaikin’i Nicolas Dupuis, araka ny vaovao avy amin’ny federasiona malagasy. Izy rahateo, tomponandraikira ao anatin’ity ekipan’ny Swift Hesperange ity, ary anisan’ireo nampiditra an’i Hakim Abdallah hilalao ao amin’ity ekipa ity.Nanamarika kosa ny mpitantana ao amin’ny federasiona malagasy fa aleo mitady ekipam-pirenena hanaovana lalao firahalahiana toy izay amin’ny klioba satria tsy misy ekipa nasionaly manao “sparring partner” amin’ny ekipa D1 izany na aiza na aiza. TompondakaL’article Kitra – Lalao fanomanana: misisika ny hidona amin’ny Barea ny Hesperange a été récupéré chez Newsmada.
Misaona ny “Rallye”: nodimandry Ratsifandrihamanana Nirina
Misaona indray ny tontolon’ny taranja fanamoriana fiarakodia satria nindaosin’ny fahafatesana, ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, Ratsifandrihamanana Nirina, 62 taona, mpanamory avy amin’ny klioba FMMSAM. Ny aretim-bavony efa nahazo azy nandritra ny fotoana naharitra no nitarika ny fahafatesany. Raha tsiahivina, ny taona 1992 i Nirina no nanomboka niditra teo amin’ny sehatra ny fanatanjahantena mekanika ka nisantarany izany ny “course de côte”, nitondrany ny fiara P.104. Niditra nanao “rallye” kosa izy, ny taona 1994 ka nitondra ny fiara P.106, ary nifaninana tao amin’ny sokajy “2 roues motrices”, izay efa nahazoany anaram-boninahitra maro. Ny p.206 no fiara nentiny nifaninana farany ka nahatonga azy ho tompondakan’i Madagasikara , teo amin’ny M11 2 roues motrices, ny taona 2019, niaraka tamin’i Alcazaria Jr. Nomeny anarana hoe : Baomba kely avokoa ireo fiara rehetra nentiny nifaninana. Efa mpandray anjara tamin’ny “Run” ihany koa i Nirina. Ankoatra ny fanamoriana fiarakodia, efa tompondaka tamin’ny taranja lomano, tany amin’ny taona 1974, 1975 ihany koa Itompokolahy. Namela mananon-tena sy kamboty vavitokana i Nirina. Raha tsy misy ny fiovana, alevina amin’ity alatsinainy ity ny nofomangatsiakany. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ny tontolon’ny rallye, izahay eto amin’ny Gazety Taratra. Torcelin sy Mi Raz L’article Misaona ny “Rallye”: nodimandry Ratsifandrihamanana Nirina a été récupéré chez Newsmada.